पाचौं दिन पनि वीपीका चिकित्सक तथा विद्यार्थीद्वारा धर्ना
पाचौं दिन पनि वीपीका चिकित्सक तथा विद्यार्थीद्वारा धर्ना अनियमितताको छानबिन नभए सम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी
धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मौलाउदै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउने चिकित्सकलाई उपकुलपतिले स्पष्टिकरण मागे पछि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले चौथो दिन पनि दुई घण्टा धर्ना दिएका छन् ।
फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेललाई उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले गत आइतबार प्रतिष्ठानको निति विपरित गएको भन्दै स्पष्टिकरण मागेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै उपकुलपति विरुद्ध चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले सोमबार देखि धर्ना तथा विरोध सभा गर्दै आएका छन् ।
आज पाचौं दिन पनि उपकुलपति कार्यालय अघि दुई घण्टा धर्ना दिदै विरोध सभा गरेका छन् । उनीहरुले बिहान ८ बजे देखि १० बजे सम्म धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न फ्याकल्टी संगठनहरुको उपस्थितीमा संयुक्त संघर्ष समिती गठन गरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरुले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले प्राध्यापक लेख्न थाले पछि उनको उपाधि माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विद्यावारिधीनै नगरि प्राध्यापक लेखेको विषयमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेका छन् ।
विरोध सभामा प्रतिष्ठानमा भइरहेको बेथितीहरुका विषयमा समेत स्पष्टिकरण दिन उपकुलपति समक्ष माग गरेका छन् । चिकित्सकलाई सोधिएको स्पष्टिकरण फिर्ता लिदै माफि नमागे सम्म आन्दोलन चलिरहने जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा. पदम नेपालीले बताए ।
प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने, वीपी सुधार हुनुपर्ने लगायतका माग रहेको डा. नेपालीले बताए । मागहरु पुरा नभए सम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाई छ ।